Karen Community Association UK: March 2012
(KNU) ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်...
Welcome To Free Kachin (KIO_KIA)
လူငယ် နှင့် ထူးချွန်ဆု
ဖက်ဒရယ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သင့်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြေ...
KNPP နဲ့ မြန်မာအစိုးရကြား အပစ်ရပ်သဘောတူ လက်မှတ်ရေး...
လက်ရှိ အစိုးရ အပေါ် အကြံပေးချက် လေးဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရနှင့် ကေအဲန်ယူ တို့၏ ပဏာမ အပြစ...
နိုင်ငံတကာ ကရင် အမျိုးသား ကွန်ဖရန့် ဆိုင်ရာ သတင်းစ...
Karen Civic Leaders Call for Political Solution
Karen People Worldwide Call for Genuine Peace and ...
As Myanmar thaws, decades-old civil war festers on...
နော်အယ်နီးထာ ရှဖီး(လ်) ကောလိပ်မှ ပညာရည်ချွန်ဆုရရှိ...
၂၀၁၁ ခုနှစ် ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆု FBRမှ စေ...
ဒီကေဘီအေ ခွဲထွက်အဖွဲ့ KNU ရဲ့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုအတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည်
ဒီကေဘီအေ ခွဲထွက်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကလိုထူးဘော ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုကို မိခင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်တဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးရဲ့ဦးဆောင်မှုအတိုင်း လိုက်ပါမှာဖြစ်ကြောင်း ကလိုထူးဘော ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဒီကနေ့ အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ် မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားပြီး၊ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းရမယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း၊ အဲဒီလိုဖြေရှင်းတဲ့အခါ KNU ရဲ့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုအတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စောဂုန်အောင်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကလိုထူးဘော ဒီကေဘီအေ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံဝန်းရံသွားမယ်လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
လာမယ့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကလိုထူးဘော ဒီကေဘီအေအနေနဲ့ ညီလာခံတစ်ရပ် ခေါ်ယူဖို့ရှိနေပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေအပြင် ပြည်သူလူထု ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်း တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
ဒီညီလာခံမှာ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအပေါ် သဘောထားတွေကို ဆွေးနွေမှာဖြစ်သလို၊ ကလိုထူးဘော ဒီကေဘီအေ ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ကိုလည်း ချပြဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကလိုထူးဘောအဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး မြ၀တီနဲ့ ဘုရားသုံးဆူမြို့တွေကို ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 09:450comments
Posted by KCA.UK at 13:050comments
Posted by KCA.UK at 22:500comments
Posted by KCA.UK at 13:170comments
DVBYV - Bagan Girls (English version) from DVB Youth on Vimeo.
(KNU) ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရန်ရှိ
Saturday, 24 March 2012 10:43
(KNU) ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး အဖွဲ့နှင့် လာမည့်ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ရှိပြီး ထိုခရီးစဉ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပါ တွေဆုံရန် ရှိသည်ဟု ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ပြောပါသည်။
“အဓိက ကတော့ ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့မှာ၊ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အတွက်ပါ။ ညှိနှိုင်းစရာလေတွေ ရှိသေးလို့ လာတာပါ။ အဲဒီ ခရီးစဉ်မှာလဲ (KNU) အဖွဲ့က ရန်ကုန်ကို ရောက်ခိုက်ပေါ့လေ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ လည်းတွေ့ချင်တယ် ဆိုလို့ တွေ့ခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။” ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင် တဦးက ဆိုပါသည်။
၄င်းဆွေးနွေးပွဲအတွက် (KNU) က အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး နော်စီဖိုးရာစိန် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် (၉) ဦးက သွားရောက်ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခရီးစဉ်ကို ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့တွင် မဲဆောက်မြို့မှ စတင်ထွက်ခွာပြီ ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့၌ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ အပါဝင် အဖွဲ့ဝင် (၇) ဦးနှင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ ပါသည်။ သူတို့သည် ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့၌ ခရီးစဉ်အတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း စရာများကို (KNU) နှင့် ဆွေးနွေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့ကို ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည့်အပြင် မကြားသေးခင်ကမှ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းနှင့် ချပြီးမှ လွှတ်ပေးလိုက်သော (KNU) ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကိုလည်း ဂတိအတိုင်း လာရောက်အပ်နှံရန် တပါတည်း ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ပါသည်။
နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် ဦးအောင်မင်း တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် (ဓါတ်ပုံ မြနှယ်စိမ်းစိမ်း (အင်းစိန်)
“ကျနော်တို့ ပေးတဲ့ဂတိအတိုင်း ပဒိုးမန်းငြိမ်းမောင်ကို လာရောက် ပို့ဆောင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ဦးအောင်မင်းက မဲဆောက်မြို့တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်သည် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ၏ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သောကြောင် မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုပုဒ်မ၊ နိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုပုဒ်မ စသည့် စွဲချက်များဖြင့် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှိ တရားရုံးက ယခုလ (၁၃) ရက်နေ့တွင် တသက်တကျွန်းနှင့် ထောင်ဒဏ် (၃) ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် (၁၉) ရက်နေ့တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးအောင်မင်းနှင့်အဖွဲ့ (ဓါတ်ပုံ မြနှယ်စိမ်းစိမ်း (အင်းစိန်))
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်သည် အသက် (၇၀) ခန့်ရှိပြီး သူ၏ဘဝ တသက်တာတွင် (၁၉၆၉) ခုနှစ်တွင် တကြိမ်နှင့် (၂၀၁၂) ခုနှစ် မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် တကြိမ် နှစ်ကြိမ်တိုင တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ် ခံရသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by KCA.UK at 11:000comments
သန်းရွှေသမီးမင်္ဂလာဆောင်အတွက် ငှားရမ်းတဲ့ပစ္စည်း ပြန်တောင်းလို့ အသတ်ခဲ့ရတာ လို့ လူပြောများတဲ့ အမှု။
Posted by KCA.UK at 19:550comments
မတ်လ ၂၄ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်(DKBA) ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအား မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကေအဲန်ယူ တပ်မ ဟာ(၇)က ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု ပြောဆိုမှုများမှာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) က ယနေ့ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
ရက်ပိုင်းအတွင်းက KNU တပ်မဟာ(၇)က တပ်မဟာစစ်ကြောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးတာမလာနှင့် ဗိုလ်မှူးဒိကွယ်တို့သည် မဲသဝေါ-ကျုံထော်ကား လမ်းကြားတွင် DKBA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု DKBA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ငြင်းဆိုလိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အဲဒီလိုမျိုး မကောင်းကြံစည်ဖို့ ကျနော်တို့မှာ စိတ်လည်းမရှိဘူး။ လုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ အလိုရှိတာကတော့ အားလုံးရဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပါပဲ။ ကျနော်တို့ မလုပ်တာကိုတော့ လုပ်ပါတယ် ဆိုပြီးတော့ ၀န်မခံနိုင်ပါဘူး။”ဟု KNU တပ်မဟာ (၇) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးစောအယ်ဆဲဆဲက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
DKBA က ပြည်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးစောလုံ့လုံကမူ “ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို DKBA က ထုတ်ပြန်လိုက်တာ မှန်ပါတယ်”ဟု ပြော သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် DKBA ကလို့ထူးဘော တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့၏ လက်အောက်ခံ ကလို့ထူးလား ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် အမှတ်(၉၀၄)တပ် ရင်း တပ်ရင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးစောဖိုးလုံးထံသို့ KNU တပ်မဟာ(၇) ဖောက်ခွဲရေး နယ်မြေတာဝန်ခံ စောသန်းဦးဆိုသူက ယခုလ (၃)ရက် နေ့တွင် လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်။
ထို့နောက် စောသန်းဦးကိုယ်တိုင် ပြီးခဲ့သည့်လ (၂၈)နေ့တွင် မိုင်းများမြှပ်နှံထားပြီး DKBA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ဖြတ်သန်းသွားလာ သည့်အချိန်တွင် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ယင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
DKBA အနေဖြင့် KNU အပေါ်တွင် ယင်းကဲ့သို့ စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းသည် အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောအယ်ဆဲဆဲက ပြောသည်။
၎င်းက “တပ်မဟာ(၇)နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သား အားလုံးရဲ့ နာမည်စာရင်းက ကျနော် အလွတ်မရရုံတမယ်ပဲ။ အားလုံးရဲ့စာရင်းက ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိပြီးသားပဲ။ ဒါပေမယ့် စောသန်းဦးဆိုတဲ့ နာမည်တော့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးသေးဘူး”ဟု ပြောသည်။
DKBA သည် ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် KNU က ခွဲထွက်ကာ (၁၅)နှစ်ကျော်ကြာ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ၎င်း၏ တပ် ရင်းအများစုက အစိုးရတပ် လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်သို့ ကူးပြောင်းသွားသည်။
သို့သော် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ် ဦးစီးသည့် DKBA တပ်ဖွဲ့က နယ်ခြားစောင့်တပ်ကူးပြောင်းရေး အစီအစဉ်ကို လက်မခံဘဲ ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့မှစ၍ တနှစ်နီးပါး အစိုးရကို ပြန်လည်ခုခံတော်လှန်ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် အစိုးရနှင့် အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာစေရန် ရည်ရွယ်၍ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (DKB A) နှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)မှ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချို့သည် မြ၀တီမြို့နယ် ဆုံဆည်းမြိုင်ကျေးရွာတွင် မတ်လ (၈) ရက်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Posted by KCA.UK at 15:320comments
Posted by KCA.UK at 07:510comments
အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာနွယ်ဖွား အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောကစားသမား
Posted by KCA.UK at 07:390comments
Posted by KCA.UK at 00:030comments
Friday, 16 March 2012 16:38
Written by လေးငယ်
Posted by KCA.UK at 00:360comments
ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင်ကို တစ်သက်တစ်ကျွန်း စီရင်ချက်ချ-ရုပ်သံ
Posted by KCA.UK at 09:480comments
by Aung Moe Win on Sunday, 11 March 2012 at 21:31 ·
တောင်ကုန်းလေးတခုပေါ်တက်ရင်း---ကိုခင်ဝမ်းရဲ့ “နှင်း” သီချင်းထဲကို စိတ်လိုလက်ရဆိုနေမိတယ်။
****နေမကွယ်သေးတဲ့ ညနေခင်းတွေ၊ ရင်ခုန်ငြိမ်းတဲ့အခါ
လျော့ရဲတဲ့ အပြုံးလေးကို ကိုယ်လည်း ပြန်ပြုံးပြနိုင်မှာ ****
*****ခုတော့ ပင်လယ်ပဲ ရှိတယ်
ပင်လယ်ဟာ ကိုယ်ပဲ ယုံမှားနေတော့တယ်။****
မတ်လရဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်အားလုံးကို “ အနက်မှောင်ဆုံး ပင်လယ်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးဟောင်းလေးနဲ့ နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်ဘယ်မှာရောက်နေလဲ။ ခင်ဗျားဘယ်မှာ ရှိနေမလဲ။ သိတ်တော့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကိုယ့်နှလုံးသားကို သစ္စာရှိကြဖို့ပဲ လိုတာပါ။
ကျနော်တို့ (၁၅) ယောက်ကို အင်းစိန်ထောင်ရဲ့သီးသန့်ဆောင်မှာ ဖမ်းဆီးထားခြဲ့ကတယ်။
တပေါင်းလဆိုတော့ ပူကလည်းပူ၊ လကလည်းသာနေတယ်လေ။ ကျနော်တို့ရဲ့အခန်းထဲကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်
မြင်ကွင်းတွေ အားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်။ ကားကြီးတွေပေါ်က လူတွေဝေကနဲအန်ကျလာတယ်။
တချို့ကလှုပ်နိုင်သေးတယ်။ လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေကို ရိုက်ပြီး အချုပ်ခန်းထထဲ ည့်တယ်။
မသေမရှင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ၊ မလှုပ်နိုင်တော့တဲ့သူတွေကို ကားတစီးပေါ် အပုံလိုက်ပစ်တင်တယ်။
နောက်မှ သိရတာ။ သူတို့ကို ကြံတောမှာ မီးရှို့သဂြိုလ်ပစ်လိုက်တယ် တဲ့။ ဘဝတလျှောက်လုံး အဲ့ဒီ မြင်ကွင်းကြီးက စွဲနေတာဗျာ။
လသာတဲ့အခါတိုင်း အလောင်းတွေကို ဘယ်သူတွေကလာကောက်မလဲ လို့ အထိတ်တလန့်တွေးနေမိတယ်။
မတ်လရဲ့ ပူပြင်းမှုကိုအန်တုနေတဲ့ လရောင်တွေအောက်မှာ သစ်ရွက်ကြွေတွေရွေ့နေပုံက ကျောစိမ့်စရာကောင်းတယ်။
ကျနော် ဒီနေ့၊ မုန်တိုင်းရဲ့ ဗဟိုချက်မအောက်မှာ ရောက်နေတဲ့ လူအားလုံးရဲ့စံနက်တံတွေကို တချောင်းချင်းဖြုတ်ချကြည့်မိတယ်။
ဖိနပ်တဖက်၊ သွေးစွန်းနေတဲ့ အင်္ကျီတထည်
မှုံပျပျ မီးရောင်အောက်က ရဲဘော်ဘုန်းမော်ရဲ့ဈာပန
မတ်လ ၁၂ ရက် ညနေခင်း
“ကျနော်က စခန်းသာဆောင်မှာ နေခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလေ။ စခန်းသာဆောင်ဆိုတာ ရန်ကုန်စက်မှု့တက္ကသိုလ်ရဲ့လမ်းတဘက်မှာ
ရှိတဲ့ ဘီပီအိုင်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ နားကရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အပြင်ဆောင်၊ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ စာမေးပွဲကျရင်၊
အစိုးရဆောင်တွေမှာနေခွင့်မရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်အပြင်ဆောင်မှာ ငှားနေကြရတယ်။ ကျော်ဆန်းဝင်း၊ဝင်းမြင့်(နွားထိုးကြီး)
ဝင်းမြင့် ( ပုလဲ) တို့ကလည်းအဲ့ဒီအဆောင်မှာနေနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ ညနေစောင်းပြီဆိုရင် သံလမ်းဘေးက
စန္ဒာဝင်းလက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ သွားထိုင်ကြတယ်။ ပြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာစတက်တော့တာပဲ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်က ကောင်မလေးက ကျနော်တို့ RIT ကျောင်းသားတွေအပေါ်
မျက်နှာသာပေးတဲ့ကိစ္စကို ရပ်ကွက်ကောင်စီလူကြီးသားက ကျေနပ်ပုံမရဘူး။ ကျောင်းသားတွေကို မိုက်ကြည့်ကြည့်တယ်။ ရန်စတယ်။
မဆလ အသိုင်းအဝိုင်းကလာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ အာဏာကိုလိုအပ်ရင် ရာဇဝတ်မှု့နဲ့ပေါင်းကျူးလွန်ဖို့ ဝန်လေးဟန်မတူဘူး။
ပြဿနာကိုရှောင်ချင်တာနဲ့ ဆိုင်ကနေထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကောင်က အင်မတန်ရန်လိုတဲ့သူလေ။
ကျော်ဆန်းဝင်းလည်းထသွားရော ခွေးခြေခုံနဲ့ထရိုက်တယ်။ ကျော်ဆန်းဝင်း ခေါင်းကွဲသွားတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း
ပြန်ချဖို့ပြင်လိုက်ကြတယ်။ ဆိုင်တခုလုံးဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်သွားပြီလေ။ ကျနော်တို့လည်း စခန်းသာဆောင်ကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။
လူပြန်စုပြီး ရပ်ကွက်ကောင်စီရုံးကိုသွားကြတယ်။ ကောင်စီရုံးက ရန်စတိုက်ခိုက်တဲ့ လူငယ်တွေကို အရေးယူပေးပါမယ်ဆိုပြီး
ကျနော်တို့ကိုချွေးသိပ်လွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တနေ့မှာ လဘ္ကက်ရည်ဆိုင်ကိုပြန်သွားတော့ ကောင်စီလူကြီးရဲ့သားကိုပြန်တွေ့
ရပြန်တယ်။ သူက ကျောင်းသားတွေကို မခိုးမခန့်ပြုံးပြီးထွက်သွားတယ်။ ကျနော်တို့တတွေ၊ ထောင်းကနဲဒေါသထွက်သွားကြတယ်။
ကောင်စီရုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်း သိတ်ပြီးအချိုးပြေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့နဲ့သူတို့ကြားမှာ အခြေအတင်စကားများနေတုံး
တစုံတယောက်က ကောင်စီရုံးကို မီးရှို့လိုက်ပုံရတယ်။ မီးလန့်သံချောင်းခေါက်သံတွေကို ကြားရတော့တာပဲ။
ကျောင်းသားတွေ ရပ်ကွက်ကိုမီးနဲ့ရှို့နေတယ်ဆိုပြီး မဆလလူကြီးတွေက ကျနော်တို့ကို ရပ်ကွက်နဲ့ရန်တိုက်ပေးတယ်လေ။
တကယ်တော့ အဲ့ဒီရပ်ကွက်ဆိုတာ သံလမ်းဘေးကကျူးကျော်ရပ်ကွက်ဖြစ်တဲ့အပြင်၊ ခါးပိုက်နှိုက်၊အလစ်သုတ်တဲ့ လူဆိုးလူမိုက်တွေ
အများအပြားနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်၊ သေမထူးနေမထူးတွေကအများကြီး။ ကျနော်သတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ငှက်ကြီးရောင်ဓါးတဝင်းဝင်းနဲ့ ရှေ့တိုးလာတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်။ သူတို့လက်ထဲက ဓါးနဲ့ ဝင်းမြင့်(ပုလဲ) ကို စလွယ်သိုင်း
ခုတ်ချလိုက်တာတွေ့ရတယ်။ ဝင်းမြင့်(နွားထိုးကြီး) ကို ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း ခေါင်းမှာ သွေးကျနေပြီ။
ခဲတွေကလည်းပလူပျံနေတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ မမြင်နိုင်တဲ့အရိပ်တွေက စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်သံတွေကြားလာရတယ်။
ကျနော်တို့တတွေ ရပ်ကွက်ထဲကနေ အရပြန်ထွက်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်ကြတယ်”
တရုတ်စကားပန်းတွေ အနှေးကြွေနေတဲ့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ပင်မအဆောက်အဦရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ
ကောင်မလေးတယောက်သက်ပြင်းနဲ့လှနေတဲ့ ညနေရီရီတွေမရှိ၊ “ အပြုံးတွေကိုချွေချွေတာတာသုံးစမ်းပါဗျာ၊ ခင်ဗျားပြုံးလိုက်တိုင်း
ကျနော့အသက်ပါသွားတတ်တာ ခင်ဗျားသိလား” လို့ ရွှတ်နှောက်နှောက်ပြောလေ့ရှိတဲ့ ကောင်လေးတွေလည်းမရှိ။ အသံတွေ--
အသံတွေ---- ကျနော့်ဆီ အစီအစဉ်မဲ့ထိုးခွဲနေကြတယ်။
ကျနော့ပခုံးပေါ်မှာ လွယ်ထားတဲ့ လွယ်အိပ်လေးလည်း ကြိုးပြတ် လို့---
လေဟာနယ်ထဲမှာ မီးလောင်နေတဲ့စွယ်တော်ရွက်တွေကို ကောက်ယူကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေမိတယ်။
အိပ်သူမဲ့ ကုတင်တွေ၊ လိပ်ပြာသေတွေ၊ အဆောင်ကော်ရစ်တာမှာ ကျွံဝင်လာတဲ့ သွေးညှီနံ့တွေ----- အော်--- အဲ့ဒီညကို-- ကျနော့ဘာသာ ပြန်ရှာကြည့်နေမိတယ်။
ကျနော်တို့ကျောင်းက ပါမောက္ခတွေ၊ အဆောင်မှူးတွေလည်းရောက်လာပြီး ကျနော်တို့ကို မိမိကျောင်းဝင်းအတွင်းဆီကိုပြန်သွားကြဖို့
ဖျောင်းဖျခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေက အေးအေးဆေးဆေးပြန်ဆုတ်ခွာလာကြပါပြီ။ တချို့ ကျောင်းရှေ့ဘတ်စ်ကား
Posted by KCA.UK at 13:250comments
KNU နဲ့ DKBA အဖွဲ့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ပဏာမတွေ့ ဆုံဆွေးနွေး
Posted by KCA.UK at 14:570comments
မတ်လ ၉ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာစေရန် ရည်ရွယ်၍ တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-DKBA နှင့် ဗိုလ်ချုပ်စောထင်မောင်၏ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတို့ကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU က ယခုအပတ်အတွင်း သွား ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Posted by KCA.UK at 13:160comments
Happy but Uncertain from Karen News on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 12:220comments
Burma Mobile Clinics from Marcella Haigh on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 12:050comments
Ethnic women and the horror of rape.... from Karen News on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 11:590comments
ဖက်ဒရယ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သင့်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုမှုအပေါ် CPP ကြိုဆို
March 8th, 2012 Chin News Group
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံအား ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သင့်သည်ဟု တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုခဲ့သည့်အပေါ် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ – CPP က ကြိုဆိုသည်။
“ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ စကာလုံးက ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ စကားလုံး မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကလည်း ကျမလေ့လာရသလောက်ဆို ဘယ်သူမှ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက်ချင်တဲ့စိတ် မရှိကြဘူး။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ လိုအပ်လို့ရှိရင် ဖက်ဒရယ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရင် ပိုသင့်တော်မယ်လို့ ဒေါ်စု ပြောတယ်။ အဲဒီလိုပြောတဲ့အပေါ် ကြိုဆိုပါတယ်။”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် CPP ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ပူးဇုန်လှယ်ထန်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ ပလောင်၊ ပအို့ဝ်၊ ၀၊ ဖလုံ စဝေါ်စသည့် ပါတီများမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ယခုလ ၆ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲ အရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးတို့ ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာက ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အပြည့်အ၀ရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစ နစ်ကို ဆိုလိုတယ်လို့ပဲ ကျနော် နားလည်တယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ပဲလေ။ သူပြောတာကို အားလုံးက ကျေနပ် ကြတာပေါ့”ဟု ဖလမ်းမြို့နယ် အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်သူ ပူးဇုန်လှယ်ထန်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD အနေဖြင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ထူထောင်လိုခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က သွားရောက်ခဲ့သည့် ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီးမြို့ခရီးစဉ်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း တခုကတော့ ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ချင် လို့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ကို ပြန့်ပွားစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က နမ္မတီးဟော ပြောပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသားဟူသည့် စကားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ဗမာဆိုတာလည်း တိုင်းရင်း သား တခုပါပဲ။ ဆိုတော့ မင်းတို့ တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတဲ့ စကားလုံး မသုံးသင့်ဘူး။ ကျနော်တို့ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးသင့်တယ်လို့ သူ့အမြင်ကို ကျနော်တို့ကို ပြောတယ်”ဟု ပူးဇုန်လှယ်ထန်းက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာပြည်၌ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများအား ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး အခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားမှု အလွန် နည်းပါးကြောင်း ပူးဇုန်လှယ်ထန်းက ဝေဖန်ပြောဆို သည်။
“အိန္ဒိယမှာဆို မီဇိုရမ်ပြည်နယ်က ၀န်ကြီးချုပ်ကို သူတို့ရဲ့ ပါလီမန်ကနေ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဥပဒေပြုခွင့်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေက အများကြီးပဲ။ ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ ပြည်နယ်တွေကို စုစည်းထားတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုလို့ ပြောလို့မရသေးဘူး”ဟု သူက ပြောသည်။
လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ ခုသာ ရှိသည့်အတွက် ယင်းပမာဏမှာ အစိုးရအား ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အရေအတွက် မဟုတ်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်အတွင်း ၀င်ရောက်လာပါက အပြောင်းအလဲများစွာကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သွားနိုင်မည်ဟု ပူးဇုန်လှယ်ထန်းက ဆက်ဆိုသည်။
Posted by KCA.UK at 11:380comments
KNPP နဲ့ မြန်မာအစိုးရကြား အပစ်ရပ်သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေး ပါတီ KNPP နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ဟာ ကရင်ပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့က အစိုးရဂေဟာမှာတွေဆုံပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ပဏာမ သဘောတူညီချက်ကို ဒီကနေ့မှာပဲ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီက အပစ်ရပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရကို အချက် ၂၀ တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးမှုအရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက်ကိုပဲ လွိုင်ကော်မြို့ အစိုးရဂေဟာမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ အတွင်းရေး မှူး (၂) ဦးအောင်ဆန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
“လောလောဆယ်ကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့၊ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေထားရှိဖို့-နောက် နယ်မြေဖြတ်ကျော်ရင်အသိပေးဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေလောက်ပဲ အဆင့်ရှိသေးတာပေါ့။ ကျနော်တို့ တင်ပြတဲ့ အချက်တွေကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ဆက်ညှိသွားဖို့ရှိတယ်။ အဓိက သူတို့ဘက်က တောင်းဆိုတာက အဲဒီအချက်တွေပဲဆိုတော့ အဲဒီအချက် ၃ ချက်အပေါ်မှာပဲ ကျနော်တို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပေါ့နော်”
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ အဓိက တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခဲ့တာကတော့-
“ကျနော်တို့ စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေ- နောက်ပြီးတော့မှ- နောင်လာမယ့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အာမခံပေးနိုင်မယ့် အချက်အလက်တွေ၊ ပြည်သူတွေ ဘဝလုံခြုံမှုရှိစေမယ့် အချက်တွေ အားလုံးအပါအဝင်ပေါ့။ ကျနော်တို့ အချက် ၂၀ တင်ပြထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကတော့ တကယ်တန်းစစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့အထိ ရည်မှန်းတယ်လေ။ အဲဒီလို စစ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းမျိုးကို အကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့က တကယ်တန်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ယုံကြည်မှုတွေရှိရမယ်၊ နောက်ပြီးတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အတွက်ပေ့ါနော်-ရှေ့ဆက်အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေ ဒီအချက် ၂၀ က တင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်-”
တောင်းဆိုချက်တွေထဲက စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အဓိက ဦးစားပေး တောင်းဆိုရာမှာတော့ စစ်ရေးအရ တပ်စခန်းတွေ ပြန်ရုပ်သိမ်းရေးကို တောင်းဆိုထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ဒေသမှာ စစ်ဆင်ရေးတွေကို ထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းစေချင်တယ်။ နောက်ပြီး တော့မှ တပ်ရင်း တပ်စခန်းတွေကို ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်း မပြုလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့ - ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝ လုံခြုံရေးကိုပေါ့နော်-ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေတဲ့ အရေးမပါတဲ့ စခန်းငယ်လေးတွေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ခိုင်းချင်တယ်ပေါ့။ အဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ နောက်- ကရင်ပြည်ထဲမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း အသစ်တည်ဆောက်မှုတွေကတော့ ရပ်ဆိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်-ရပ်တန့်ထားချင်တယ်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့ အဓိကတောင်းဆိုတဲ့ စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ။ ဒါတွေကလည်း သူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဆက်ပြီးမှ အသေးစိတ်ညှိဖို့လိုတဲ့ အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်လေ”
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဘက်က စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးဖုန်းနိုင် ဦးဆောင်သလို မြန်မာအစိုးရဘက်က နယ်စပ်ရေးရာလုံခြုံရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးတင်စိုးဦးဆောင်ပြီး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲကို ရထားဝန်းကြီးဦးအောင်မင်းအပါအ၀င် ဝန်ကြီး ၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ဒါကတော့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက်ကို ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အကြောင်း မအေးအေးမာ စုံစမ်းတင်ပြခဲ့တာပါ။
တဆက်တည်းမှာပဲ ဒီသဘောတူလက်မှတ်ထိုးပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံတကာ အကဲခတ် လေ့လာသူတွေကို တက်ရောက်လေ့လာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ရထားဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းမှုပွဲတွေမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားအရာရှိတွေ လာရောက် လေ့လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောပါတယ်။
“ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးက သံမှူးကြီးတဦးရယ်၊ နောက်- ဗြိတိသျှသံရုံးက သံရုံးအတွင်းဝန် တဦးရယ်၊ UNHCR ကနေပြီးတော့ မြန်မာပြည်ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ရယ် - အဲဒီ ၃ ယောက်က Observer အနေနဲ့ အစည်းအဝေးကို အစအဆုံးလာတက်တာ တွေ့ပါတယ်။ ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာတော့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းရှင်းပြနေတာကတော့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့၊ သမ္မတရဲ့မိန့်ခွန်း ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့အနေနဲ့လည်း ဒါကို ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားအားထုတ် ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ဟာကို သူတို့ ပိုလုပ်တော့ နောက်ပွဲတွေမှာလည်း လေ့လာတဲ့သူတွေကို လက်ခံပြီးတော့ လေ့လာစေမယ်လို့ ပြောတာ ကြားပါတယ်”
ဒါကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေပါ။ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံတကာကို လေ့လာခွင့်ပေးတာဟာ နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးမှုတွေ ပိုပြီးပွင့်လင်းလာဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ ဘက်ကလည်း အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာဖို့နဲ့အတူ နိုင်ငံတကာဘက် ကလည်း အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ ရှိလာအောင် စတင်ခွင့်ပြုတာဖြစ်မယ်လို့လည်း ဦးလှမောင်ရွှေက သုံးသပ်ပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 10:460comments
Posted by KCA.UK at 10:090comments
လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရနှင့် ကေအဲန်ယူ တို့၏ ပဏာမ အပြစ်ရပ်စိုင်းထားမှု့ အပေါ် အမြင်သဘောထားများဖြစ်ပါသည်။
Posted by KCA.UK at 10:060comments
နိုင်ငံတကာ ကရင် အမျိုးသား ကွန်ဖရန့် ဆိုင်ရာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
By SIMON ROUGHNEEN / THE IRRAWADDY Monday, March 5, 2012
Zoya Phan reacts after speaking on the third day of the Conservative Party annual conference in Blackpool, UK, in 2007. (PHOTO: Reuters)
NGKOK—Welcoming the tentative recent truce between the Karen National Union (KNU) and the Burmese government, several Karen leaders say that reforms are not yet being felt in Karen State and other ethnic regions of Burma.
“The KNU is stillabanned organisation,” says Zoya Phan, the chair of the European Karen Network. “Many of the repressive laws are still in place in Burma, and these need to be changed.”
The rules effectively mean that the KNU cannot discuss peace openly with Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy, and that an estimated 160 Karen political prisoners remain in jail, despite recent government amnesties.
Fighting began in Karen State in the late 1940s, making the war between the Burmese army and the Karen the world's longest-running. Ending the conflict in Karen State is touted as one of several reforms needed if international sanctions on the country are to be dropped. However the Burmese army and the Karen are yet to discussapolitical solution to the fighting, which many Karen say is necessary for the recent truce is to go further.
"Havingaceasefire withoutapolitical solution is like pressingapause button, notastop button,” says Zoya Phan, speaking in Bangkok on Monday.
The Karen number an estimated 3-4 million people, and live in Karen State along the border with Thailand, and in Burma's Irrawaddy delta. Originally animist,abelief system to which many Karen still adhere, the majority of Karen are now Buddhist, withasignificant Christian minority of perhaps 30 percent. Over recent decades, hundreds of thousands of Karen have fled fighting in Burma to Thailand, where around 140,000 mostly Karen refugees live in nine camps along the Thai-Burma border, while tens of thousands more have been resettled in Western countries.
Welcoming the reforms undertaken by the Burmese government in recent months, K'nyaw Paw,amember of the Karen Women's Organisation, said that though there has been positive change elsewhere in Burma, “there needs to beagenuine ceasefire leading to genuine dialogue with ethnic groups.”
Echoing long-standing demands foradecentralized, federal Burma, Zoya Phan, whose father wasaKNU leader before being assassinated in Mae Sot, Thailand, in 2008, said, “We Karen want peace, andafederal democratic government.”
One hundred and sixty-seven Karen delegates congregated in Karen State in late February to discuss the recent reforms in Burma and the proposed KNU-Burmese army truce.
Saw Kenneth Moe,aKaren representative based in South Korea, said that the Burmese army remains stationed in Karen villages, preventing Karen civilians from returning home. “We heard from refugees and displaced people,” he said, “and they cannot go home.”
Over 3,000 villages, mostly Karen, have been destroyed in eastern Burma, according to human rights organisations. The destruction—wrought largely by the Burmese army—has prompted calls foraCommission of Inquiry (CoI) into human rights abuses in Burma, an inquest that could lead to some form of international tribunal.
However proponents of the CoI have pulled back from this demand in recent months. “We are not working on this issue at present, because of the current political climate,” said Zoya Phan.
The Karen representatives said that there should be international access to Burma's prisons to account fully for the remaining political prisoners. “There are around 160 Karen political prisoners,” says K'nyaw Paw. “But the number could be higher, as it is very difficult to gather all the information from inside Burma.”
Representatives from Karen organizations worldwide today call for genuine peace throughout Burma and for national reconciliation towards the establishment ofafederal union. They also appealed to the international community, especially the European Union and the United States , to maintain pressure on the Burmese Government until there is tangible political change for the Karen and for all the people of Burma .
Today’s appeals were the result ofafour-day conference organized by the Karen National Unity Committee from 27 February to 1 March in Kawtholei, Karen State . The conference was attended by 167 Karen participants, including community and religious leaders, as well as representatives from women, youth and other Karen ethnic organizations from inside Burma and around the world.
“We welcome the peace initiative of the Karen National Union (KNU),” said K'nyaw Paw, Executive Member of Karen Women’s Organization and Presidium Board Member of Women's League of Burma. “We are collectively calling on the Burmese Government to genuinely commit toaceasefire with the KNU, stop military operation in Karen areas, start political negotiation, and guarantee ethnic rights for the Karen people and for all the people of Burma .”
Participants of the conference also expressed their support for the KNU in working with other ethnic and democratic alliances including United Nationalities Federal Council for the establishment ofafederal democratic Burma .
“We acknowledge that there have been some political changes in the central parts of Burma ,” said Zoya Phan, Chair of the European Karen Network and Advisor of the Karen Community Association UK. “However, the situation in Karen areas has not improved and the rights and protection of the Karen have not been guaranteed. These are critical issues that must be addressed in order to achieve lasting peace in our communities, and for there to be significant political reforms in Burma .”
“As Karen overseas, we pledged to do all we can to support the ceasefire negotiations between the KNU and the Burmese Government,” said Saw Kenneth Moe, Vice-Chairperson of the Karen National Fellowship–Korea. “Karen people around the world have pledged to work in unity and we hope the international community will stand with us by pressuring the Burmese Government to work sincerely for peace and national reconciliation in our country. International governments could also playaconcrete role as observers to make sure the process is transparent.”
The conference also stressed that development projects, many of which are already underway in Karen areas, must take into account the local people’s rights to participation in decision-making, right to land ownership and well being of future generations. The Burmese Government’s economic policies must be based on the long-term benefit of the people, especially local communities.
Zoya Phan: +66811002857 / +447738630139
K'nyaw Paw: +66810295503
Saw Kenneth Moe: +66896448764 / +821087147019
In this Feb. 13, 2012 photo,aKachin soldier is treated byadoctor atahospital near Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar, after he was injured byalandmine on the frontline against Myanmar government troops. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 12, 2012 photo,amother cooks inarefugee camp in Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 12, 2012 photo,aboy holdsabowl of rice atarefugee camp in Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 15, 2012 photo,amother walks with her children inarefugee camp in Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 15, 2012 photo,aKachin soldier guardsafrontline position on Tsinyu Mountain, 20 kilometers (13 miles) away from the Myanmar government troops-controlled area in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 15, 2012 photo, Kachin soldiers patrol nearafrontline position on Tsinyu Mountain, 20 kilometers (13 miles) away from the Myanmar government troops contral area in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 15, 2012 photo, Kachin soldiers takearest atafrontline position on Tsinyu Mountain, 20 kilometers (13 miles) away from the Myanmar government troops-controlled area in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 15, 2012 photo, Kachin soldiers guardsafrontline position on Tsinyu Mountain, 20 kilometers (13 miles) away from the Myanmar government troops-controlled area in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 13, 2012 photo, female recruits of the Kachin Independence Army, one of the country's largest armed ethnic groups, pray before breakfast atamilitary camp near Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 13, 2012 photo, recruits of the Kachin Independence Army (KIA), one of the country's largest armed ethnic groups, undergo training nearaKIA flag atamilitary camp near Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 13, 2012 photo, recruits of the Kachin Independence Army, one of the country's largest armed ethnic groups, undergo training atamilitary camp near Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Monday, Feb. 13, 2012 photo, recruits of the Kachin Independence Army, one of the country's largest armed ethnic groups, undergo training atamilitary camp near Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 13, 2012 photo,arecruit of the Kachin Independence Army, one of the country's largest armed ethnic groups, takesarest before training atamilitary camp near Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atrocities. (AP Photo/Vincent Yu) — AP
In this Feb. 13, 2012 photo, recruits of the Kachin Independence Army, one of the country's largest armed ethnic groups, march during training atamilitary camp near Laiza, the area controlled by the Kachin in northern Myanmar. The Kachin ethnic minority was promised its freedom in 1948, and is still waiting for the military-backed government to deliver. Meanwhile, the war continues to generate waves of refugees and allegations of atroc
TSINYU MOUNTAIN, Myanmar — The seasoned guerrilla officer surveys the battlefield from his do-or-die mountaintop defenses: to the front, visible through the haze,atown torched and brutalized by Myanmar government troops. To his rear, the stronghold of the country's most potent insurgency, one of several ethnic rebellions that erupted more than 60 years ago.
နော်အယ်နီးထာ ရှဖီး(လ်) ကောလိပ်မှ ပညာရည်ချွန်ဆုရရှိ
Karen Youth Award
Posted by KCA.UK at 22:570comments
၂၀၁၁ ခုနှစ် ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆု FBRမှ စောထူးထူးအယ်ရရှိ
မတ်လ ၂ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ (ကေအိုင်စီ)
ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်ပေးလျှက်ရှိသည့် ပဒိုမန်းရှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုအား ၂၀၁၁ခုနှစ်ဆု အတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ) ထိမ်းချုပ်နယ်မြေ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဒူးပလာယာ ခရိုင်အတွင်းရှိလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေသည့် Free Burma Ranger (FBR) အဖွဲ့မှ အသက် ၂၈နှစ်အရွယ် စောထူးထူးအယ်က ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့သည်။
ပဒိုမန်းရှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ရရှိရန် ကရင်ဒေသအတွင်းရှိ လူထုအကျိုးပြု လူငယ် ၄ဦးအား သက်ဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ အဆိုတင်သွင်းခဲ့ရာ အလုပ်ခွင်တွင် ခိုင်မာပြတ်သားစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စောထူးထူး အယ်အား ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်တနေရာ၌ ပြုလုပ်သည့် ကရင့်အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ယမန်နေ့က ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လုပ်ကြံခံရသည့် ဖခင်ဖြစ်သူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ချုပ်ဟောင်း ပဒိုမန်းရှာလားဖန်းနှင့် ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့် မိခင် နမ့်ရွှေကျင်တို့ကို ရည်စူး၍ သားသမီးများဖြစ်သည့် စောစေးစေးဖန်း၊ နမ့်ဘွားဘွားဖန်း၊ နမ့်ဇိုယာဖန်းနှင့် စလုံ့ဖန်းတို့က ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ကာ လူထုအကျိုးပြု ကရင်လူငယ်များကို နှစ်စဉ် ဆုများချီးမြှင့်ပေးလျှက်ရှိသည်။
ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကရင်လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံပြီး တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေသည့် အသက် ၃၅နှစ်အောက် ကရင်လူငယ်များအား ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ၂၀၀၉ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ပေးအပ်လာခဲ့ရာ ညောင်လေးပင် ခရိုင်မှ နော်ဖောကဘလာထူး၊ ဖာပွန်ခရိုင်မှ စောညွှန့်ဝင်းနှင့် ဘိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်မှ နော်ဒီဇင်ဘာဖောတို့အား ဆုရှင်များအဖြစ် ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။